သင့်ရဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့ဒစ်ဂျစ်တယ်ေူပာင်းလဲရေးကိုသို့လျောက်ပတ်သင်တန်း | ယင်း
18 ဧပြီ 2017
ဒီအခိုက်မှာလက်တွေ့မဆိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာ gander ယူ. , သငျသညျတခုချဉ်းကပ်ဒစ်ဂျစ်တယ်အသွင်ပြောင်း၏လက္ခဏာများကိုတွေ့မြင်ရပါလိမ့်မယ်။ အများဆုံးအဖွဲ့အစည်းများဒီနေ့ခေတ်ကနေ့စဉ်နှင့်ရှည်လျားသောခရီးစစ်ဆင်ရေးသို့ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းစနစ် join ဖို့လိုအပ်ချက်ရဲ့သိကြကတည်းကပုံမှန်ပြဿနာကြောင့်ခေါ်ပါ။
အာကာသပြင်ဆင်နေနည်းပညာအတွက်ရှေ့ဆောင်တစ်ဦးအဖြစ်ကကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအတွက်သူများတိုးတက်ရေးပါတီနှင့်ရွေ့လျား၏ဝဒေနာလွယ်ကူချောမွေ့ရန်လိုသည်။ ဒါကကျနော်တို့အစဉ်မပြတ်ကိုက်စားခြင်းပိုမိုရရှိနိုင်ပါနဲ့ရိုးရှင်းတဲ့ပြင်ဆင်နေစေရန်ချဉ်းကပ်ဖို့စဉ်းစားနေတဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်သင်ယူ: တစ်ခုမှာချဉ်းကပ်မှုအပေါ်-တောင်းဆိုမှုကိုအနေအထားပြင်ဆင်နေအခြားဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကကျနော်တို့ဈေးကွက်ထဲမှာယခုကဲ့သို့အဖွင့်အဘယျသို့ mirror မှပစ္စည်းဥစ္စာ၏ကြီးမားသောငွေပမာဏကိုပို့ကြသည်မဟုတ်သောမြေပေါ်တွင်အရေးကွီး၏။ ယင်းအစားကျွန်တော်တို့ဟာစျေးကွက်အတွက်အပေါက်တစ်ပေါက်ကိုမြင်ရဘယ်မှာလိမ်းဒေသများတွင်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ဖန်တီးရန်ကြိုးစားနေပါတယ်။ ဤသည်ကိုသင်သတ်သတ်မှတ်မှတ်အုပ်စုတစ်စုနှင့်ဖြစ်ပျက်မှုများအတွက်စံပြချစ်ခင်လေးမြတ်စီစဉ်ကိုမဆိုအစီးအနင်းအတွက်ရမှတ်ပြင်ဆင်နေ၏ရှေးခယျြမှုရှိသည်ဖို့အဖွဲ့အစည်းများခွင့်ပြုထားသည်။
နောက်ဆုံးတော့ဒစ်ဂျစ်တယ်သင်ယူအဖွဲ့အစည်းများမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ကြီးစွာသောမှမိမိတို့လုပ်သားများယူကူညီပေးရန်ဖို့အကောင်းဆုံးကို item ပို့ဆောင်အကြောင်းပါ။ ကျနော်တို့ခွဲမယ့်အစားဝယ်ယူတဲ့အဖွဲ့ဝင်သင်ယူကြောင့်အသုံးချဘယ်တော့မှရန်လိုအပ်သည်။ သင်ယူမှုအားပေးဖို့ကျနော်တို့အမြဲတမ်းသင်ယူမှုအသိပညာအဆင့်မြှင့်တင်ရန်ဝေဖန်မှုများအတွက်လေယာဉ်မှူးများနှင့် tuning လုပ်နေပါတယ်။
ရိုးရှင်းစွာမျိုးဆက်ဇာတ်စင်သို့ရွေ့လျားဆန့်ကျင်အဖြစ်အကောင်းဆုံးကို item အောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ပြီးမြောက်ဖို့ကျနော်တို့ကို pre-ဖန်ဆင်းခြင်းလေ့ကျင့်ခန်းအပေါ်သင်ကြားပို့ချ originator များသည်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်စွမ်းအင်တစ်ခုစဉ်းစားဆင်ခြင်စရာအတိုင်းအတာရင်းနှီးမြှုပ်နှံ။
အသံကျော်ဆလိုက်သငျသညျကာလ၌အချက်မှာတိုက်ပိတ်စိတ်ကူးအတွက်ယူကူညီစေခြင်းငှါအနေဖြင့်ဥပမာ, ကျနော်တို့သုတေသနနှင့် client ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ clients များမှန်မှန်ဘာသာရပ်များအပေါ်အလွန်အရေးပါသတင်းအချက်အလက်ကျော်လွန်တစ်ခုခုချင်သောတွေ့ဆုံမှတဆင့်သင်ယူပါတယ်။ ဒါကကျနော်တို့ Pre-ဖန်တီးမှုအတွက်အချိန်ထိုကဲ့သို့သောအကြီးအငွေပမာဏထားသည့်အကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်။
အိမ်မှာအသက်, စိတ်ထား, မြူး, ဒါမှမဟုတ်ပင်နေ့စဉ်သိမ်းပိုက်တာဝန်ဝတ္တရားတစ်ခုသင်ယူသူရဲ့အနီးကပ်သူတို့ကိုင်ထားပမာဏအတွက်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဟုယူဆနိုင်သည်ကိုသဘောပေါက်သူတစ်စုံတစ်ယောက်သူတို့လက်ရှိဒေတာတို့ကိုလောင်စေရန်ပြင်ဆင်ကြသောအခါပြင်ဆင်ထားရန်အခွင့်အလမ်းခွင့်ပြုထဲမှာဘုနျးကိုမြင်သည်။ "သင်တစ်ကြိမ်နည်းနည်းလေ့လာသင်ယူနှင့်သင့်အလုပ်အသက်ရှင်ခြင်းသို့သင့်ရဲ့သင်ယူမှု join သောချွတ်အခွင့်အလမ်းတွင် (သို့မဟုတ်စာမေးပွဲ!), ထိုသင်ယူမှုသင့်ရဲ့အတွေ့အကြုံနှင့်တဝိုက်အခြားလမ်းတစ်ဖဲ့ကိုရခြင်းဖြစ်ထွက်လှည့်။ သင်လေ့လာသင်ယူနေကြတယ်ဆိုတာကိုလေ့လာသင်ယူနေကြသည်, သင်တစ်ဦးလမ်းပိုင်းတာခြင်းမရှိဘဲသငျသညျကျိန်းသေသိနှင့်အတူသစ်ကိုအပိုင်းပိုင်း fit နိုင်ပါတယ်သင်သည်အဘယ်ကြောင့်ငါသိ၏။
စစ်မှန်သောသင်ယူမှုနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုတိုးတက်မှုအဘယ်အရာကိုမဆိုစီမံခန့်ခွဲသူနှင့်ခွဲတောင်းပန်ဖြစ်ကြသည်။ မြုံကျန်ရှိသောနည်းနည်းလေးနည်းနည်းသင့် client ဒါမှမဟုတ်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တိုးတက်လာအောင်ကူညီလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ကျနော်တို့အခုသို့သော်ကျနော်တို့ဒါ့အပြင်မိုဃ်းတိမ်သည်နှင့်ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးနဲ့တူနယ်မြေများစကေးသောလမ်းညွှန်ပေါ်ရှိအခြားကျယ်ပြန့် themes များရှိသည်, Microsoft နှင့်လျှောက်လွှာဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီမှအထူးသဖြင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ပြင်ဆင်နေတွင်လည်းနှင့်ဆက်ဆံရာတွင်ပါတယ်။
လမ်းကြောင်းကဘာလဲ? - လမ်းကြောင်း၏အဓိပ္ပာယ် | ကွန်ယက်အဖွဲ့